नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बिजुलीको चरम अभाव हुने दुई हिउँद लोडसेडिङ विना बिते । लाग्छ, एउटा दुस्वप्नको अन्त्य भएको छ !
बिजुलीको चरम अभाव हुने दुई हिउँद लोडसेडिङ विना बिते । लाग्छ, एउटा दुस्वप्नको अन्त्य भएको छ !
हिउँदमा १६ घण्टा मात्र होइन, वर्षायाममा खोलामा बाढी आएर टनाटन विद्युत् उत्पादन भएका वेला समेत लोडसेडिङको कहर खेपेर नेपालीको एक दशक (२०६३–७३) अँध्यारोमा बित्यो । तर, एकाएक, वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने २०७३ को लक्ष्मीपूजामा देशैभरि लोडसेडिङ भएन । सबैलाई अचम्मित तुल्याउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘आइन्दा लोडसेडिङ नहुने’ सार्वजनिक घोषणा गरे । नभन्दै, त्यसयता बिजुलीको चरम अभाव हुने दुई हिउँद लोडसेडिङ विना
बितेको छ । लाग्छ, एउटा दुस्वप्नको अन्त्य भएको छ ।